बिर्तामोडमा गुड्यो ‘ड्रिम जिप, मेड इन नेपाल’ «
बिर्तामोडमा गुड्यो ‘ड्रिम जिप, मेड इन नेपाल’
प्रकाशित मिति : पुस २८, २०७८ बुधबार
सोमबार अपरान्ह ४ बजेतिर बिर्तामोडको सडकमा अनौठो सवारीसाधन देखियो । चार चक्के भए पनि न त्यस्तो गाडी यसअघि सडकमा देखिएको थियो, न त त्यसबारे कसैलाई थाहा थियो ।
‘ड्रिम जिप, मेड इन नेपाल’ लेखिएको सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट थिएन । बरु मोबाइल नम्बर उल्लेख थियो । सानो आकारको छुट्टै खाले सवारीसाधन भएकाले देख्ने जति सबैको नजर एकपटक गाडीमा अडिएकै हुन्थ्यो । वेलावेला त गाडी हेर्नेको भिड पनि लाग्थ्यो ।
सबैको ध्यान तानेको यो गाडी झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–६, चैतुबारीका युवा शिवराज लिम्बुले कुदाइरहेका थिए । उनका अनुसार यही गाडी हाँकेर उनी घरदेखि बिर्तामोडसम्म आइपुगेका थिए । “मैले सुपर स्पेल्डर बाइकको पुरानो पार्टपूजा प्रयोग गरेर अन्य सामग्री जोडजाड गरे यो गाडी बनाएको हुँ” उनी भन्छन्, “जोडजामको सामान प्रयोग गरेर गाडी बनाएको हुँ ।”
विद्यालय पढ्दा लिम्बुको रुचि इञ्जिनियरिङको पढाइतिर थियो । तर जिन्दगीले कहाँ सधैं सोचेकै बाटो पकड्छ र ? परिस्थितिले उनी मानविकी संकाय तिर भर्ना भए ।
साचेको विषय पढ्न नपाए पनि सानैदेखिको रुची र लगाव मेटिन्न । उनको विद्युतीय सामग्रीप्रति कति लगाव थियो भन्ने त छरछिमेकले पनि सहजै बताइदिन्छन् । किनकि, उनीहरुलाई थाहा छ, लिम्बुको घरमा कुनै त्यस्ता विद्युतीय सामग्री बाँकी छैनन्, जसका नट र पेचहरु उनले नउघारेका हुन् ।
पढ्न नपाए पनि के भयो र ? इच्छाशक्ति भए अहिले जे पनि सम्भव छ । युट्युब र इन्टरनेटमा बग्रेल्ती सामग्रीहरु पाइहाल्छन् । लिम्बुले त्यही गरे । उनी भन्छन्, “इन्टरनेटमा विभिन्न सामग्री हेरेँ, पढेँ । त्यसैको सहयोगमा यो गाडी बनाएको हुँ ।” उनका अनुसार उनले गाडीको ह्याण्डल प्रयोग छन्, चक्का लगायतका सामग्री आफैं बनाएका हुन् ।
गाडी बनाउन उनलाई चार लाख रुपैयाँ जति लाग्ने भयो । तर पैसा थिएन । मध्यवर्गीय परिवारमा हुर्किएका उनलाई त्यतिधेरै रकम परिवारबाट सहयोेग हुन पनि गाह्रै थियो । “मैले ३ वर्ष लगाएर काम गर्दै पैसा कमाउँदै गाडीमा लगानी गरेँ” सन्तोषको सुस्केरा हाल्दै उनी बोल्छन्, “पैसा हुने हो भने यतिको गाडी तीन महिनामा बनाउन सक्छु । पैसा नभएकाले केही समय धेरै लागेको हो । यसमा चढ्दा पनि छुट्टै आनन्द मिल्छ ।” लिम्बुका अनुसार यो गाडी प्रति किलोमिटर ८० को गतिमा कुद्छ ।
#मेड इन नेपाल
टीभएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटर मासिक किस्तामा
टीभीएसले ग्राहकहरुको लागि नयाँ योजना ल्याएको छ । कम्पनीले ग्राहकले पैसा नै नथपी, आफ्नो पुरानो
गण्डकी प्रदेशमा गाडी भाडा बढ्यो
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको न्यूनतम ५.५५ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गरेको छ
नेपाली बजारमा हिरोको विद्युतीय स्कुटरको बिक्री तथा वितरण सुरू भएको छ ।हिरो विद्युतीय स्कुटरको नेपालकालागि
फक्सवागनको नयाँ मोडल नेपाली बजारमा
नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक वितरक पूजा इन्टरनेसनल नेपालले नयाँ मोडलको गाडी बजारमा ल्याएको छ
अग्नी ग्रुपको महिन्द्रा ट्याक्टर उत्सवका विजेता घोषणा
नेपालमा महिन्द्रा अटोमोबाइल र ट्रयाक्टरहरूको अधिकृत वितरक, अग्नि इन्कर्पोरेरेटेडले ‘महिन्द्रा उत्सव’ नाराका साथ महिन्द्रा ट्रयाक्टर
सरकारी भाडादर लागू गर्न व्यवसायीलाई दबाब
जुम्लामा गुड्ने साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारीको भाडादर निर्धारण गरिएको छ ।सरकारले निर्धारण गरेको लामो